Wargeys Caalamiya Oo Somaliland Ku Tilmaamay Rajo Ifaysa | HAATUF ONLINE
Home » Somali News » Wargeys Caalamiya Oo Somaliland Ku Tilmaamay Rajo Ifaysa
Bern, Swiss, Febr-5, 2020 (Haatuf) – Wargeys ka soo baxa dalka Switzerland ayaa warbixin uu daabacay maalintii shalay waxa uu Somaliland ku tilmaamay rajo dhalaalaysa, marka loo eego dalalka dariska lah.
Warbixinta Wargeyska Swiss International Newspaper ayaa u qornayd sidan:-
Somaliland waxay ku dhawaaqday inay ka go’day Soomaaliya 1991-kii, laakiin waddanna adduunka kama aqoonsana. Si kastaba ha noqotee, waxyaabo qaar ayaa halkaas ka sii fiicnaanaya marka loo eego deriskiisa.
Meesha baabuurta la dhigto ee ilmuhu ku jeedo waa waddan aan si rasmi ah u jirin. Goobta ayaa ah “Huteel Guled” oo ku yaal magaalada Hargeysa, ee caasimada Somaliland, waa Dal madaxbannaan oo ku yaal geeska bariga Afrika.
Sannadkii 1991-kii waxay ku dhawaaqday Somaliland inay ka go’day Soomaaliya. Maanta waa dal loogu yeedho de facto State oo leh dowladd, ciidan iyo lacag intaba, shilinka Somaliland. Marka loo eego sharciga caalamiga ah, Somaliland wali ka mid tahay Soomaaliya; Ma jiro wadan aduunka ka mid ah oo aqoonsan, sideed wadan oo kaliya ayaa aqbala baasaboorka Somaliland.
Somaliland, oo sawir qaade François Klein uu u socdaalay, ayaa inta badan waxa ka maqan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah. Sannadkii 2014, Bangiga Adduunka wuxuu qiyaasay in ku dhawaad ​​40 boqolkiiba dadka ku nool miyiga ay liitaan. Si kastaba ha noqotee, Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday Madaxbanaanidu waxay leedahay dimoqraadiyad sifiican u shaqeyneysa iyo nidaam dhaqaale oo xasiloon. Soomaaliya waxaa loo arkaa “Waddan guuldaraystay”, Somaliland waxay tusaale u tahay guusha. Sababtaas awgeed, muhaajiriintii hore sida Cali Guuleed, badanaa waxay ku noqdeen dalkoodii. Wuxuu ku noolaa Texas wuxuuna ka shaqeyn jiray warshadaha batroolka, magaalada Hargeysa wuxuu ka aasaasay “Guled Hotel”, oo sidoo kale xarun ganacsi u leh maalgashadayaasha. Iyagu aad bay muhiim ugu yihiin Somaliland: sababta oo ah aqoonsi la’aanta caalamiga ah awgeed, majirto wax kaalmo horumarineed ah oo waa inay lafteedu hubiso in lacag soo gasho dalka. Somaliland run ahaantii maanta waxay leedahay xafiisyo shaqaynaya, oo aad ufiican oo shaqeynaya maanta. Sidaa darteed waxay aad u soo jiidaneysaa maal-gashadayaasha.
Muuqaalka Magaalada Hargeysa, Caasimadda Somaliland. Waqti fog ma ahan in magaalada gabi ahaanba la dumiyo. Markii uu kaligii taliyihii Siyaad Barre xukunka la wareegey dabayaaqadii sannadihii 1970-yadii, wuxuu dalka oo dhan gacanta ku dhigay, waxkastaba, wuxuu ku dhuftay woqooyiga, oo ah meesha ay ku taalo Hargaysa.
Sanadkii 1988 ayuu magaalada duqeeyey. Magaalada Hargeysa si weyn ayaa loo burburiyey, ku dhawaad ​​50,000 oo rayid ah ayaa la diley. Sannadkii 1991, fallaagadu waxay ka kaxeeyeen ciidammada Soomaaliya Somaliland waxayna afgembiyeen kaligii-taliyihii. Muddo yar ka dib, gobolku wuxuu ku dhawaaqay madax-bannaanido. Dib-u-dhiska Hargeysa ayaa la bilaabay 1991-kii, oo ay maalgeliyeen inta badan deeq-bixiyeyaasha maxalliga ah iyo tabaruc ka timid qurbo-joogga. Magaalada dekeda ah ee Berbera kadib, Hargeysa ayaa hadda ah meheradda labaad ee ugu weyn Somaliland. Qofna ma oga sida saxda ah ee dadka deggan magaalada. Xisaabinta laga soo bilaabo 2017 waxay qaadataa qiyaastii 861,000 oo qof, qiyaaso kale ayaa sidoo kale ka socda in ka badan hal milyan. Marka la barbardhigo Mogadiscio, oo ah caasimada Soomaaliya, waxaad si xor ah ugu dhex wareegi kartaa magaalada Hargeysa, maleeshiyada argagixisada ah ee al-Shabab badanaa waxay weeraraan koonfurta. Sawirku wuxuu muujinayaa nolosha magaalada: waxaa jira makhaayado iyo kafateeriyaal, waxbadan ayaa la hagaajiyay. Sharafta iyo farxadda dalka waa carwada sanadlaha ah ee caalamiga ah.
Bashiir Xussein ayaa fadhi ku yeeshay Rugta Guurtida ee baarlamaanka Somaliland. Baarlamaanku wuxuu ka kooban yahay laba gole: Golaha Wakiilada, oo ku xigeenadooda ay doortaan dadka, iyo Golaha Guurtida, oo ay ku fadhiyaan gudoomiyaasha qabaa’ilka kala duwan. Gobolka waxaa qaabeeyey reeraha waaweyn ee taariikhiga ah, qabiilooyinka, qarniyo badan. Hoggaamiyayaashoodu waxay leeyihiin saameyn aad u weyn iyo isku dhacyo fudud. Somaliland horumar iyo gadaal ayey ka tahay isla waqtigaas. Doorashooyin xor ah ayaa dhacay dhowr jeer tan iyo 1991, markii lagu dhawaaqay madax-bannaanida, iyo hannaanka baarista iris-ka ee doorashadii madaxtinimada ee dhowaan 2017 ka hor istaagtay cod-bixiyeyaasha laba jeer. Si kastaba ha noqotee, xaqiiqda ah in doorashada dib loo dhigay laba sano ayaa cadho ka dhex abuurtay dadka, dawladuna waxay si xun uga falcelisay mudaaharaadyada. Wax yar oo kale waa la khilaafsan yahay: qoraa ayaa la xiray 2019 maxaa yeelay wuxuu ku baaqay in dib u habeyn lagu sameeyo xabsiga iyo nidaamka garsoorka dambiyada ee gabay; sedex nin oo kale ayaa loo xiray barta Facebook ee dhaleeceynta dowladda. Maaddaama Islaamku yahay diinta dawladda, haweenku wax yar bay leeyihiin oo waxay kaloo ka hadlaan siyaasadda. 98 boqolkiiba dumarka iyo gabdhaha waa la gudaa. Laga soo bilaabo 2018, naafeynta xubinta taranka waxay ahayd dambi fal ah, isku midna waxaa lagu dabaqayaa ku xadgudubka galmada.
Adhijir da ‘yar oo u dhow xeradiisa teendhooyinka ee Somaliland. In kabadan nus dadka waa reer guuraa. Sanad walba waxay la socdaan riyaha, idaha iyo geela min waqooyi-bari ee Itoobiya iyagoo aadaya dekedaha ku teedsan Gacanka Cadmeed, halkaasoo xoolaha looga dhoofiyo, gaar ahaan Sacuudi Carabiya. Qoysas badan ayaa noloshan ku noolaa qarniyo. Nolol maalmeedka bulshada waxay ku dhaceysaa iyaga midba midka kale, kaasoo ah midda u daacad ah midba midka kale.